50 Tusaalooyin Wanaagsan ee Naqshadaynta Astaanta Filimka | Abuurista khadka tooska ah
Shineemo waa mid ka mid ah maadooyinka bixiya naqshadeynta ciyaar badan, maaddaama aan ka hadleyno anshax marinta oo hal-abuurka runti daruuri looga baahan yahay hal dhinac ama mid kale, waa wax la mid ah naqshadeynta.
Qoraalkan waxaad ku arki doontaa wax aan ka yarayn konton halabuur oo caan ku ah filim, badankoodu waa dad karti badan oo hal abuur leh.
Fadlan la soco in shirkadaha la xiriira ay noqon karaan kuwo khiyaali ah oo loo sameeyay kaliya astaanta.
1 Sidee astaanta shineemadu u noqonaysaa
2 Sida loo abuuro astaanta filimka
3 45 tusaalooyinka astaanta filimka qabow
3.4 Armaajada Filimka
3.5 Muus Filim
3.6 Naadiga Filimada Afrika
3.7 Filimka Qoolley
3.8 Filimyada Roller Coaster
3.9 Filimada sasabashada ah
3.10 Qaybta Shineemo
3.11 6 Dabaqyada
3.12 Filim Bomb
3.13 Filim shineemo saafiya
3.15 Filim bisil
3.16 Filim Madax-bannaan
3.17 Seconds 91
3.18 Filimada Piar
3.19 Filimaan Liin jajab ah
3.20 Filim Faneed
3.21 Filim waraaqo ah
3.22 Bandhigga Filimka Gaaban ee Adduunka
3.23 Filimka Urbia
3.25 Beeraha Reel
3.26 Bandhiga Filimka Bristol
3.27 Shineemooyinka Magaalada Bay
3.28 Filimooyin Wadooyin Bug leh
3.29 Iftiinka gawaarida maqalka
3.30 Istuudiyaha Warshadaha
3.31 Filim maalinle ah
3.32 Filimooyin naxdin leh
3.33 Xarunta Filimka
3.34 Kareemka Filimka
3.35 Beer Flick
3.36 iFilm Flot
3.37 Waxaan nahay dolly
3.38 Filimka Lava
3.39 Filimka Honolulu
3.40 Warshad Furan
3.41 Xigasho Filim
3.42 Filimaanta Suugaanta
3.44 Filimada Qunyar Socodka ah
3.45 Filimmo Filim Dhaqso Leh
Sidee astaanta shineemadu u noqonaysaa
Un Astaanta shineemadu had iyo jeer way iska hadli kartaa haddii aan ogaanno sida loo isticmaalo canaasiirta ugu badan ee ku xiran warshadan. Waxaan ku haynaa hal dhinac cajaladda filimka, kaamirooyinka, jilayaal caan ah ama xitaa tikidhada filimka. Xaqiiqdii, dhamaadka maqaalkan waxaad ka heli kartaa noocyo kala duwan oo wanaagsan oo ah astaamo shineemo ah oo kaa caawin doona inaad go'aan ka gaarto naftaada haddii aad abuureyso baloog ama bog u heellan adduunkan sixir badan iyo inta madadaalo wanaagsan leh ee ay leedahay loo siiyay isirkeenna.
Haddii aan ka hadalno jilayaasha caanka ah,oo aan xiriirin karin koofiyadda iyo bakooradda Chaplin? Ama jaantuska Alfred Hitchcock ee dhinaca aragtida? Kuwani waa qaar ka mid ah tusaalooyinka aan si dhakhso leh ugu xiriirin karno muuqaal muuqaal ah iyo astaan ​​u gaar ah warshadaha filimka. Marka shaqo yar iyo daryeel yar waxaan ku heli karnaa naqshadeena iyo asalka asalka ah; in kasta oo runta la sheego, waxaan si fudud u samayn karnaa kala duwanaansho qaar ka mid ah kuwa aad u arki doontid mid aad u xiiso badan.
La filimka 'clapperboard' sidoo kale waa cunsur kale oo muuqaal ah kuwa ugu dhow ee matalaya astaantaas. Sida oo kale waxaan u isticmaali karnaa qaabka wareegsan ee duubista filimka si aan u abuurno xoogaa indho qabasho leh. Waxaad arki doontaa mid u heellan shineemo naxdin leh taas oo qaab wareegsan loo adeegsaday si seddex madoobaad oo madow loogu muujiyo maaskaro filimkaas caanka ah ee Cabsida leh. Fudeyd iyo hal-abuurnimo wadajir ah si loo abuuro astaanta filimka ee aan raadineyno.
Sida loo abuuro astaanta filimka
Waxaan horay u sheegnay in nalagu dhiiri galin karo tusaalooyin fara badan oo aad hoos ku arki doontaan, laakiin sidee u abuureynaa shaneemo? Isticmaalka madow iyo cadaan waa wax soo noqnoqda maxaa yeelay waa isla asalka shineemo kahor intaan midabku muuqan. Waa saldhig aan u tagi karno abuuritaanka astaan ​​xarrago leh oo keenta hawadaas caadiga ah.
Dhinaca kale sidoo kale waan awoodnaa waxaa ku ilhaaminaya shineemada 80-maadkii, taas oo, inkasta oo aysan ahayn mid tayo sare leh, waxay leedahay cunsurro sumcad leh oo aan maanta ku arki karno taxane sida Waxyaabaha Shisheeyaha oo awood u yeeshay inay dib u soo xusuustaan ​​filimada tacaburka iyo waxyaabo kale oo badan. Neon iyo kuwa midabbada casaanka ah, casaanka iyo liinta leh isbarbardhigyadooda ayaa noqon kara qiime kale oo lagu xisaabtamo.
Mana iska indho tiri karno qaab-qorista wanaagsan. Saan serif ayaa loo isticmaali karaa abuurista nooca 2001., Space Odyssey, markaa waxaad ka heli kartaa fikrad ah sida xiisaha leh ee ay noqon karto in laguu waxyoodo font si loo abuuro astaantaas. Waxaan horeyba ugu dhejin karnaa lahjadda qaar ka mid ah waxyaalaha muuqaalka sida duubista, xardhashada, tigidhada filimka ama tagista shineemada hadda, adeegsanno astaan ​​mataleysa qulqulka adeegyada sida HBO ama Netflix.
La sawirka kaniini ama taleefan casri ah oo cajalad filim ah Inaad ku dhex marto madow iyo caddaan waxay noqon kartaa aasaas weyn. Markaa waxay noqon laheyd in la siiyo taabasho halkan iyo halkaas si loo helo khadadkaas abuuri kara isafgarad u dhexeeya walxaha kala duwan. Si kale haddii loo dhigo, waxaan ka hadleynaa ku darista waxyaabahaas cusub ee aan ku xirnay shineemo hadda jirta. Shineemo bedelay qaabka, tan iyo, inkasta oo ay weli jiraan qolalkaas waaweyn, waxaa sidoo kale jira fadhiga guriga, xakameynta TV-ga, taleefan casri ah oo shaashadda laga sii daayo iyo Smart TV oo ah cunsur muuqaal badan leh.
Si waxaan tagnaa Netflix ama HBO, qaab-qoristeedu waa mid aad u xiiso badan. Wax walba waxay noqon lahaayeen in xoogaa la beddelo oo la dhigo magaca shirkadeena ama bartaas oo aan dooneyno inaan ku soo uruurino wararkii ugu dambeeyay ee wararka ugu xiisaha badan ee taxanaha TV-ga, dokumenteriyada ama filimada.
Had iyo jeer waa muhiim inaad isha ku dhufato shey muuqaal ah oo ku xiran shineemada, ha noqoto kii hore, sideetamaadkii ama kan hadda jira. 3D sidoo kale waa la isticmaali karaa maxaa diidaya laambad miiska loo isticmaalo filimo badan oo Pixar ah? Ama hooska qaar ka mid ah astaamaheeda ugu caansan? Waxaa jira fikrado badan, sidaa darteed waa arrin isku day ah oo looga tagayo kuwa aan aadka u jecel nahay inaan la kulanno fikradahaas cusub ee maskaxda ku soo dhaca.
45 tusaalooyinka astaanta filimka qabow
Waxaan samaynaa a dib u eegista astaamaha shaneemooyinka ugufiican iyo canaasiirta si dhakhso leh ugu xira mid ka mid ah warshadaha madadaalada ee wax badan siiyay tobanaan sano. Astaamo matalaya jilayaasha filimada ugu caansan ama cajaladda filimka ee sidaas loogu isticmaalay in badan.
Ma iloobi karno qaar ka mid ah khiyaanooyinka si loo sameeyo astaan ​​filim wanaagsan oo si dhakhso leh ugu xirno balooggeena ama shirkadeena warshadahaas. Waxaan ku siineynaa fikrado ku saabsan sida loo isticmaalo waxyaalahaas cusub sida Netflix ama astaanta HBO; iyo iyada oo aan la iloobin fadhiga iyo maratoonka taxanaha TV-ga.
Everti jiido cajaladda filimka si aad u sameysato astaan classic oo midabka dahabiga ahi u taagan yahay Hollywood Oscars.
Raum wuu ina qaadaa ka hor nooc xaraf ah iyada oo aan wax intaa dhaafsiisan jirin.
Looxa loo adeegsaday sida mandiil si aad ugu xiirto caddaankaas iyo magaca madow iyo shaarubaha oo kale sida shirkadda u heellan shineemada, weyn, miyaanay kula ahayn?
Filimka Closet usa tan dharka labiska iyo waxa muhiimka ah soo saarista filimka. U isticmaal cajaladda filimka moodal labbiska.
Kuma jirno Filimka Woody Allen, laakiin haa fikrad weyn oo adeegsanaysa dhaldhalaalka dahabka iyo mooskaas oo ah cajalado filim ah.
Naadiga Filimada Afrika
Como hadday ahaan lahayd shineemo, Astaantani ma iloobeyso midabada matalaya Afrika si ay u sameystaan ​​astaan ​​shineemo oo weyn.
Horaan u idhi taas adoo adeegsanaya qaabka wareega ee duubista filimku waa fiican yahay sida calaamadahan si aad u wanaagsan loo fuliyay.
Filimyada Roller Coaster
Cajaladdii duudduubnayd ee la dul dhigay kaamirada filimku waa cudurdaarka ugu fiican si aad u dabaysha laba saacadood Roller Coaster. Fikrad kale oo weyn oo ku jirta astaanta.
Filimada sasabashada ah
Filimada sasabashada ah isticmaal jillaab ku yaal liiska laga bilaabo filimka si loo abuuro astaan ​​shineemo sawir dhab ah.
Ma fududaan karin oo Qeybta Shaneemo waxay adeegsataa qorshahaas joomatari iyada oo cajaladda filimka ah.
6Dagaalad haa waxaa loo tuuraa midabka si looga tago cajalad ee filimku u dhacayo si loo sameeyo qaab 6. Fudud oo aad waxtar u leh.
Waad aragtaa sida duub duub ku duub kamaradda filimka Si ballaaran ayaa loo adeegsadaa. Hada bambo ahaan "o".
Filim shineemo saafiya
Sida mid ka mid ah kor ku xusan, Daahir daahir ah ayaa adeegsanaya cajaladdaas dhacaya si ay u sameysmaan astaantaada adigoon ilaawin buluug cirka ah.
Filmalti wuxuu adeegsadaa shaashadda TV-ga si uu dhaqso ugu soo jiito dareenka, ma xasuusataa wixii laga sheegay isticmaalka aaladda casriga ah ama kiniin?
Bisil wuxuu aadaa diirka tufaaxa si loo sameeyo cajalad duub oo duuban.
Qaarkood kabaha loogu talagalay Filimada Madaxa Bannaan.
Nos waxaan u muuqanaa wax yar oo yaab leh leh calaamaddan, laakiin 91-ka ilbiriqsi wax badan bay dhahaan ...
Haddana waan tagnaa mid ka mid ah xubnaha ugu matalaya ee warshadaha filimada.
Filimaan Liin jajab ah
Mar labaad miro, laakiin markan liin baa loo qaybsamay cajaladaas filimka ah.
La midabka origami inuu metelo shimbir cajaladdiisa filimku saldhig u yahay.
Filim waraaqo ah
Films Paper ayaa si fudud uga dhigaya taas filmstrip oo loo tarjumay qaab yar oo aan la taaban karin iyo cillad muuqata oo aad u wanaagsan. Waxay ku leedahay taabasho caadi ah nooca qoraalka oo qabow.
Bandhigga Filimka Gaaban ee Adduunka
Chaplin wuxuu laalaadaa hareeraha shaaribkaa. Tusaale ka mid ah sida loo abuuro astaan ​​si dhakhso leh ugu xirmeysa shineemooyinka.
Urbiya ku qas reer magaalka cajaladaas filimka ah taasi waxay dhalisaa muuqaal.
Laga yaabee mid ka mid ah kuwa ugu adag ee lala xiriiriyo shineemada, laakiin waa astaan ​​wanaagsan, tan iyo substrate-ka ayaa ka hooseeya dusha sare kuwaas oo noqon kara filimo badan. Xiiso leh
Sidii aan ahayn shaqaalaha beeraha, giraangiraha cagaf-cagaftaasi waa duubyada cajaladda ku duuban kamaradda filimka.
Bandhiga Filimka Bristol
Una tigidhka filimku waa qumman yahay halgamayaashaas si loo abuuro astaan ​​shineemada. Fiican
Shineemooyinka Magaalada Bay
Astaantan ku noqo gooladaha ballaadhan ee duubka filimka inuu matalo astaan ​​wanaagsan oo ishaas iyo buluugga ah.
Filimooyin Wadooyin Bug leh
Waxay ku dhow yihiin inay sidaas noo sheegaan kama baqaan inay gawaaridooda qaataan hoos loo dhigo waddooyinka ugu murugsan, filimada xiisaha leh? Suurtagal
Iftiinka gawaarida maqalka
Un astaan ​​wanaagsan oo leh midabbo asaasi ah iyo adeegsiga qaabab si loo dhaliyo nalka taraafikada.
Haddana waxaan u laabaneynaa cajaladda filimka si ay u sameysma dusha sare ee warshad. Ku habboon tahay ilaha dhiirigelinta.
Filim maalinle ah
Una qaab qoraalka caadiga ah ee filimada maalinlaha ah taas ayaa laga arki karay Antena 3.
Mid ka mid ah asalka ugu wada fudud kana fudud mid. Isticmaala qaabkaas wareegga leh saddexdaas dhibic wareeg ah madow si loo siiyo taas, naxdin.
Kuraasta shineemo? Sidee baynaan hore uga fikiri karin. Sariirta Netflix way samayn kartaa waxkeeda.
Un jalaato sida duudduuban ka filim filim.
Una beerta filimada in ka badan kaamil ah cajaladdaas filim sidaa loogu isticmaalay astaamo filim aad u tiro badan.
Mana ahayn in ay ahayd soo saaraha filimkaas cabsida leh leh miishaarka korantada.
Waxaan nahay dolly
Haddana waxaan dib ugu laaban karnaa kaamirooyinka kujira gawaarida si loo duubo muuqaalada banaanka. Waxa halkaa u socdaa waxay umuuqdaan inay yihiin.
Lava kuwa ugu sarreeya taasina waa waxa ugu fudud, laakiin aad wax ku ool ah.
Mar labaad duub, laakiin markan waxaa lagu sawiray ubax. Fikrad weyn sida astaanta shaleemada.
Halkan qiiqa warshada Waxaa loo isticmaalaa sida cajaladda filimka.
Cajiib tan Astaanta shineemada oo aan u dhaafnay mala awaalka ee daawade.
para filimada caadiga ah astaantaan tagaa in ka badan fiican. Qalin lagu muujinayo tiyaatarka iyo kuwii hore.
Midabka kujira wehliyaha sidii aan nahay kahor Instagram-ka filimka.
Filimada Qunyar Socodka ah
Si fiican looma matali karo dhaqaaq tartiib ah oo wata gowrac. In ka badan weyn.
Filimmo Filim Dhaqso Leh
Oo waan tagnaa leh baaldi salool taasi ma maqna.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » 50 Tusaalooyin Logo Movie Cool
Miyay mararka qaar wax fiican tahay in wax loo rogo sida ololaha KFC?